Siyakuhalalisela ngosuku lweSitimes Worker Day evesini naseprose. Siyakuhalalisela ngosuku lweSitimela Worker: funny, oluhlelekile, olufushane, osebenza nabo
Ngokokuqala ngqa, usuku loSitimela eRussia lwasungulwa ngo-1896 futhi lwaqeda usuku lokuzalwa lukaMbusi uNikolai the First - umsunguli wohlelo lokuxhumana wesitimela eMbusweni waseRussia. Ngaleso sikhathi kwakungeyona nje usuku lokuhlonipha abasebenzi bezitimela, kodwa futhi iholidi elibalulekile kulo lonke izwe. Kulolu suku, abasebenzi bezinhlangano zezitimela babe nosuku, futhi kusihlwa kwakukhona imicimbi yemikhosi ezingeni elisemthethweni. Ezikhathini zaseSoviet, usuku lweholide luhlehlisiwe kusukela ngoJuni 25 kuya kuJuni 30. Futhi namuhla amaRussia agubha usuku loSitimela ngoMgqibelo ngeSonto lokuqala lika-Agasti. Lokhu kusho ukuthi ngo-2016 ukuhalalisela ngosuku lukaSitimela kubalingani bakhe nabangani ezihlobene nezindlela zensimbi, kuzodingeka zilungiselelwe ngo-Agasti 7. Siyakuhalalisela esihlokweni sethu sanamuhla ukuthi iSework Worker's Day iyinikeza ivesi ne-prose: okusemthethweni, okuhlekisayo, okufutshane ngama-sms nokuhlekisa izithombe. Siyaqiniseka ukuthi ngokuqinisekile uzothola phakathi kwabo ukuthokoza kakhulu ngosuku lweSitimela Worker, okuyinto ngokuqinisekile izokwenzela abasebenza emigwaqeni.
Ukuhalalisela okuhle ngosuku lweSitimela ngo-2016 evesini
Phakathi kwabasebenzi bezitimela azikho "abantu abavamile". Njengomthetho, labo abalungele umsebenzi obunzima nokungajwayelekile njalo baya kulo msebenzi. Nsuku zonke laba bantu abathobekile nabalula benza imisebenzi yabo engahlelekile, basinika ukuhamba okunethezeka futhi okusheshayo kulo lonke elaseRussia nakude kunemingcele yalo. Bazikhandla ngokuzikhandla ukuze bazuze okuhle futhi ngaphandle kokwedlulisela okufanelekile kuphela ukuhalalisela kakhulu ngosuku lweSitimela Worker sika evesini noma nge-prose. Okulandelayo, uzothola ukukhethwa okujabulisayo ngaleSuku Lomzila Wezitimela evesini, okungajabulisa kokubili osebenza naye, umuntu ozalwayo, kanye nomzila wesitimela owaziwayo.
Ukuhalalisela okusemthethweni ngosuku lwe-Railwayman kuze kube ngu-2016 osebenza nabo ku-prose
Ungakhohlwa mayelana nokufaneleka okukhulu kwabasebenzi besitimela kanye nasezingeni elisemthethweni. Izisebenzi zabo zeholide ezisebenzayo zamasheya esitimela azitholi kuphela ukuhalalisela ngokomthetho ngosuku lweSitimela Worker in prose nevesi. Ngodumo lwabo bahlela amakhonsathi, banikeze izipho ezingakhohlwayo nezitifiketi zokufaneleka komsebenzi, mema izinkanyezi ezidumile ezigidini ezigubhayo. Futhi-ke, balungiselela izifiso ezifudumele futhi eziqotho kakhulu, ngaphandle kwalokho okungenakwenzeka ukucabanga ngeholide elilodwa. Ngendlela, isithunzi esihle kunazo zonke esikuthokozelayo ngosuku lweSitimela Worker's in prose sitholakala ekukhethweni kwethu okulandelayo.
Funny ukuhalalisela komunye osebenza naye ku-Railroad Day evesini
Ubani omunye, kungakhathaliseki ukuthi osebenza naye, uyakwazi kanjani ukuqonda umsebenzi wakho, ukuhlola ngokulinganayo zonke izinjabulo nezinkinga, ukusekela nokujabula ngesikhathi "ukuvinjelwa" okulandelayo? Izinsuku zomsebenzi zabasebenzi bezikhungo zezitimela azikwazi ukubizwa ngokuthi zilula futhi azikhathazeki. Umsebenzi wabo uhlobene nemithwalo yemithwalo esindayo, izingozi ezihlala njalo kanye namathuba aphezulu okuthuthukiswa kwezimo zamandla amakhulu. Ezimweni ezinjalo, kunzima ukusebenza ngaphandle kokuhlekisa, izisebenzi eziningi zesitimela ziyakuhalalisela futhi zihlekisayo. Kubandakanya ukuhalalisela okumnandi ngosuku lweSitimela Somsebenzi eWestern Worker's Day evesini kusuka osebenza nabo owazi kahle yonke imithwalo yemithwalo yemisebenzi kanye nenjabulo. Okulandelayo, siqoqe ukuthokoza okuncane emavesini ngosuku lweSitimela, okuzosebenza nabo ngokuqinisekile.
Ukuncoma okufushane ngama-sms emavesini ngosuku loSitimela 2016
Kufanelekile ukuhalalisela ngoMhla womzila wesitimela kungenzeka futhi ngosizo lwamavesi amancane, isibonelo, kuma-sms. Ngempela, into esemqoka ukukhombisa ukunakwa nokukhetha izifiso ezinhle ezizojabulisa umgcini womkhosi. Siyaqiniseka ukuthi phakathi kokuncoma okufutshane ngosuku lweSitimela Worker emavesini we-SMS, esiwalungiselele ngezansi, ngokuqinisekile uzothola izifiso ezifanele.
Siyakuhalalisela ngosuku lweSitimela Worker - Izithombe namaCards 2016
Ngo-Agasti 7, 2016, abasebenzi bezitimela bangabongiswa ngosuku lwabaSebenzi Basitimela ngosizo lwamakhadi okubingelela kanye namakhadi okubingelela. Ukuhalalisela okunjalo ngoSuku loMzila Wezokuthutha kungafakwa ngezimfuno ezisemthethweni, ezinhle noma ezifingqiwe evesini noma nge-prose. Ukuhalalisela okunjalo ngeSuku lomzila wesitimela namakhadi kumuntu osebenza naye noma ojwayelene naye uphelele. Ukuhalalisela okunjalo kuzoba okufanele futhi kuhlakeni lwezenzakalo zemikhosi nezinhlelo.
Izipho zoNyaka Omusha ezinganeni esikoleni nasenkulisa. Yini ongayinika intombazane nomfana, isiphi isipho esithakazelisayo nesingavamile ukukhetha eNyaka Omusha 2017
Siyakuhalalisela ngoSuku Lothisha nabo bonke abasenkulisa ngo-2017
Qhubeka Bhala ukubuyekeza Hambisa ukubuyekeza Ukubuyekeza kwami ​​Buyekeza kusukela ku- Izibuyekezo Ukuba usizo Okusha kakhulu Isilinganiso Ukuba usizo Zonke izinhlobo Zonke izinhlobo Uhlobo lwakamumva Bhala ukubuyekeza Izindwangu kanye namavidiyo we-carols yi-art yase-Ukraine
Toasts for the New Year 2017 - funny, funny, short. I-toasts engcono kakhulu yamaqembu ezinkampani zeNyaka Omusha ka-2017
Ibhulashi elibomvu: izakhiwo zokwelapha nesicelo kumuthi womuntu
Ukunakekela amakati, izifo zamakati
Izandla zikaMama: izinto ezinhle ezihlosiwe zezingane
Ukuza Okwesithathu: U-Alexander Gobozov ubuyela ku- "Dom-2"
Izinkukhu ezikhuniwe zikhohlisiwe
Unesizungu, ungaphila kanjani?
I-Coconut Pie elula
Indlela yokukhetha izicathulo ezifanele ku-prom 2016
Izitha ezibaluleke kakhulu zesisu
Amathiphu awusizo wokunakekelwa kwezinwele
I-Vitamin isiphuzo "I-cranberry emangalisayo"